.: ချစ်စကိုရှည်စေ၊ မုန်းစကို တိုစေ
ကျွန်မ ဒီ Post ကိုရေးဖြစ်ဖို့ အချိန်တွေအများကြီးယူပြီး သေသေချာချာ တွေးတောစဉ်းစားခဲ့ရ တာကိုပထမဦးဆုံးဝန်ခံထားပါရစေ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စာရေးတာဝါသနာပါတဲ့ စာရေးသက်လေးနည်းနည်းလေး ရနေပြီဖြစ်တဲ့ကျွန်မအတွက်စာတစ်ပုဒ်ချရေးဖို့ကို အချိန်တွေလချီပြီး ပေးစရာမလိုတော့တဲ့အပြင် Mood၀င်ရင်ဝင်သလောက် တစ်ရက်(သို့) နှစ်ရက် သုံးရက် အတွင်းမှာပဲ ကျွန်မရေးချင်တဲ့ အကြောင်းအရာကို အချောသတ်စဉ်းစားနိုင်ခဲ့တာကြောင့်ပါ။ ဒါပေမယ့် ဒီဆောင်းပါးလေးကိုတော့ အချိန်၂လကြာ သေချာစဉ်းစားပြီးမှ ရေးသားဖို့ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့တာ ကြောင့်ပါပဲ။
ကျွန်မတို့အားလုံးဟာ ဘ၀ပေးကုသိုလ်ကံသိပ်ကောင်းလွန်းလို့ (၃၁)ဘုံသောလောကီသား တွေထဲမှာမှ ရခဲလှတဲ့ လူ့ဘ၀ကို ရရှိခံစားနေကြသူတွေဖြစ်ရတာ အင်မတန်မှကို ကံကောင်း ခြင်းတွေ ပိုင်ဆိုင်ထားကြလို့ပါ။
အဲဒီအတွက် ကျွန်မတို့ဟာ လောကကြီးမှာ တစ်ယောက်တည်းရပ်တည်နေလို့ မရကြပါဘူး။ မိသားစုနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်အသိုင်းအ၀ိုင်းနဲ့ မိတ်ဆွေအပေါင်းအဖော်တွေနဲ့ နေ့စဉ်ထိတွေ့ ဆက်ဆံနေကြရပါတယ်။
အချိန်နှင့်အမျှထိတွေ့ရင်းနှီးမှုများလာလေလေ၊ပြောဆိုဆက်ဆံရေးတွေ များပြားလာလေလေ တစ်ဖက်သားစီရဲ့စိတ်ထဲမှာအဆင်မပြေမှုလေးတွေ၊ ချစ်ခင်ကြင်နာလိုမှုတွေ၊ သံယောဇဉ်တွေ၊ ပြသာနာအဖုအထစ်တွေ၊ စကားအရှုပ်အထွေးတွေ၊ နွေးထွေးတဲ့ စောင့်ရှောက်မှုတွေ၊ အားမလို အားမရဖြစ်မှုတွေအပြင် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိစ္စ ရပ်တွေမှာ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးရင်း အချင်းချင်း ခံစားချက်တွေ နှီးနှောဖလှယ်မိတာတွေ ရှိနိုင်ကြပါတယ်။ အဲဒီအခါမျိုးမှာ ကျွန်မတို့ အားလုံးရဲ့ ရင်ဘတ်ထဲကို ခံစားချက် အမျိူးမျိူးကနေရာယူလာခဲ့ကြပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုခံစားချက်တွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ပုံပြင်လေးတစ်ပုဒ်လောက်ပြောခွင့်ပေးပါရှင်။
တစ်ခါက နှစ်ပေါင်းများစွာ ပေါင်းသင်းလာတဲ့သူငယ်ချင်း ၃ယောက်ရှိပါတယ်။
(A)ဆိုတဲ့ သူငယ်ချင်းက (B)ကိုပြောခဲ့တာပါ။
“ အိမ်မှာလေ ငါတို့မိသားစု ပြသာနာလေး ဖြေရှင်းစရာရှိလို့ပါ။ နင့်ကိုလေ ငါ လကုန်လို့ လခထုတ်ရင် ပြန်ဆပ်ပါ့မယ်ဟာ...တကယ်ပါ”
သူငယ်ချင်း(A)ရဲ့တောင်းပန်ခယစွာနဲ့ ပြောကြားတောင်းဆိုလာတဲ့စကားလုံး နူးနူးညံ့ညံ့တွေကို သူငယ်ချင်း(B) ဘယ်လိုမှ ခံစားနိုင်စွမ်းမရှိခဲ့ပါဘူး။သူ့ရဲ့အတွေးထဲမှာ ငယ်ပေါင်းကြီးဖော် သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်ရဲ့စိတ်သောကအပူတွေကို မျှဝေခံစားလိုစိတ်ပြင်းထန်ခဲ့တာကြောင့် …
“အေးပါဟာ ကောင်းပါပြီ။ နင်အဆင်ပြေအောင် ငါစုထားတဲ့ပိုက်ဆံလေးတွေထဲကနေ ပေးလိုက် ပါ့မယ်။ ဒါပေမယ့် နင်ငါ့ကို သေချာတော့ပြန်ဆပ်ပါဟယ်။ ငါ့မှာလည်း နင်သိတဲ့အတိုင်း ပဲ၊ အပိုဝင်ငွေမရှိဘူးဆိုတာ”
“စိတ်ချသူငယ်ချင်း ငါလေ လကုန်တာနဲ့ ပြန်ဆပ်ပါ့မယ်။ ဒါပေမယ့် နင် ငါ့ကို ပိုက်ဆံချေးတာ ဘယ်သူ့ကိုမှ မပြောပါနဲ့နော်။ နင်နဲ့ငါပဲသိကြေးနော်။ ကတိပေးလား?”
သူငယ်ချင်း (A)စိတ်ချမ်းသာဖို့ ငွေကြေးရော ကတိပါ စေတနာအပြည့်နဲ့ ကူညီခဲ့လိုက်ပေမယ့် အချိန်တန်လို့ ပိုက်ဆံပြန်ဆပ်ရမယ့်အချိန်ရောက်လာတဲ့အခါ အကြွေးပြန်ရဖို့နေနေသာသာ အပြောင်း လဲကြီးပြောင်းလဲသွားတဲ့ သူငယ်ချင်း(A)ရဲ့ ပရိယာယ်ကြွယ်ဝလှတဲ့ စကားလုံးလှလှလေးများ ကိုသာ ပိုင်ဆိုင်ရရှိလိုက်ပါတယ်။
“ဟဲ့ ဘာပိုက်ဆံ(၂)သိန်းလဲ နင် ငါ့ကို ဘယ်တုန်းက ပေးခဲ့ဖူးလို့လဲ၊ ဘာတွေ လာပြောနေတာ လဲ၊ နင့်မှာသက်သေရှိလို့လား”
သူငယ်ချင်း(A)ရဲ့စကားလုံး မုန်တိုင်းအောက်မှာ နာလန်မထူနိုင်အောင် လဲကျသွားတဲ့ သူငယ်ချင်း (B) တစ်ယောက် စိတ်ကို အတတ်နိုင်ဆုံး ထိန်းချုပ်ရင်း …
“နင် ငါ့ကို အဲဒီနေ့ကပြောပြီးပြီးချင်း ငါချက်ချင်းထုတ်ပေးလိုက်တဲ့ ငွေ(၂)သိန်းအတွက် ငါ့မှာ သက်သေပြစရာ လူမရှိပေမယ့် နင့်စိတ်ဓာတ်ကနင်ဘယ်လိုလူလဲဆိုတာ ကောင်းကောင်းကြီး သက်သေပြသွားပါပြီ။ နင်နဲ့ ငါရဲ့ ဆက်ဆံရေးက ဒီပိုက်ဆံ(၂)သိန်းနဲ့တင် တန်ဖိုးဖြတ်လိုက်ရ တာကိုတော့ တကယ်ဝမ်းနည်းမိတယ် … ”
ကဲ ဒီပုံပြင်လေးရဲ့ အဆုံးသတ်မှာ အတွေးပွားစရာလေးတွေ တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခု ဖြစ်သွားကြ မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ ပုံပြင်လေးထဲမှာ အားမလို အားမရမှုတွေဖြစ်သွားခဲ့ကြရင်တော့ နောက်ဆက်တွဲ ပုံပြင်လေးကိုဆက်ပြီးနားထောင်ကြည့်ပေးပါဦးရှင်။
သူငယ်ချင်း(A)နဲ့(B)ကြား မှာ ဒီဖြစ်စဉ်ကိုမသိတဲ့ အဝေးရောက်သူငယ်ချင်း(C)က ရုတ်တရက် ပါဝင်လာခဲ့ရပါတယ်။ တစ်နေ့မှာ သူငယ်ချင်း (C)က သူငယ်ချင်း(A)ကိုမေးခဲ့ပါတယ်။
“သူငယ်ချင်း(A)ရေ၊ (B)တစ် ယောက်ရော မတွေ့တာကြာပြီ၊ ဘယ်တွေ ပျောက်နေလဲကွာ၊ ငါတို့ သူငယ်ချင်း(၃)ယောက် တစ်ရက်ဆုံတွေ့ကြရအောင်။ နင်ပဲဦးဆောင်ပြီးချိန်းပေးပါနော်”
သူငယ်ချင်း(C)ရဲ့ စကားသံက သူငယ်ချင်း (A)အတွက် အခက်ကြုံစရာဖြစ်နေခဲ့ရပါပြီ။
သူသာ တွေ့ဆုံဖို့ချိန်းပေးလိုက်ရင် သူနဲ့(B)ရဲ့ ဇာတ်လမ်းပေါ်သွားမှာကို စိုးရိမ်ပြီး
“သူ့ကိုငါ မတွေ့ချင်ဘူး၊ ငါ့ဆီကပိုက်ဆံ(၂)သိန်းချေးတုန်းက ချေးသွားပြီးပြန်ပေးချိန်ရောက်တော့မှ သက်သေရှိသလား၊ ဘာလားနဲ့ အလကား သူငယ်ချင်း၊ ပြီးတော့ နင့် မကောင်းကြောင်းကိုလည်း သူက အတင်းတွေပြောသေးတာ။ နင် ကတွေ့ ချင်သေးတယ် ဟုတ်လား ? တော်ပြီ ဟာ ငါသူနဲ့ ဆက်သွယ်မလုပ်တော့ဘူး”
အဝေးရောက်သူငယ်ချင်း(၃)ယောက် ပြန်ဆုံတွေဖို့တောင်းဆိုမိကာမှ မထင်မှတ်ဘဲကြား လိုက်ရတဲ့ စကားသံတွေက သူငယ်ချင်း(C) အတွက်ဇဝေဇ၀ါဝေခွဲမရပေမယ့် သူ့မကောင်းကြောင်းတွေကို(B)က ပြောခဲ့တယ်ဆိုတဲ့စကားတစ်ခွန်းတည်းနဲ့တင်ပဲ သူငယ်ချင်း(B)အပေါ် အမုန်းကြီး မုန်းတီးသွားခဲ့ ရပါတယ်။
သူငယ်ချင်း(၃)ယောက်လည်း ဒီကိစ္စနဲ့အဖုအထစ်တွေဖြစ်သွားခဲ့ကြပြီး ရာသက်ပန်စကားမပြော ကြတော့ပါဘူး။
ဒါပေမယ့် ဘယ်သူမှ မသိလိုက်တာက သူငယ်ချင်းAဆီမှာ့ ပိုက်ဆံချေးတဲ့အချိန်က အမှတ်မထင် ဖမ်းထားလိုက်မိတဲ့ Phone recording File လေးကို သက်သေ အဖြစ်တည်ရှိနေရက်နဲ့ ဘယ်သူ့ကိုမှ ဖွင့်ဟမပြောတော့ဘဲရေငုံနှုတ်ပိတ်နေလိုက်တာပါပဲ။
A ရဲ့ စိတ်ဓာတ်က ဖြေရှင်း မှ ပြေလည်မယ့် ပြသာနာမျိူးကို မလိုလားဘဲတစ်ဦးကို တစ်ဦးယုံကြည်မှုနဲ့ ဖေးမတည်ဆောက်တဲ့ ဆက်ဆံရေးကိုသာ လိုလားတောင့်တ ခဲ့မိတာကြောင့်ပါပဲ။ ဒီပုံပြင်လေးမှာ ကျွန်မ အသိတစ်ခုရလိုက်တာက ပြသနာတစ်ခုကို နားနှစ်ဖက်နဲ့ နားမထောင်ဘဲ တစ်ဖက် သတ်စကား၊ တစ်ဖက်နားနဲ့ တစ်ဖက်သတ် သုံးသပ်ဆုံးဖြတ်လိုက်ခြင်းကြောင့် သံယောဇဉ်ကြိုး တစ်ချောင်းမပြတ်သင့်ဘဲ ပြတ်သွားခဲ့ရတာပါ။
ကျွန်မတို့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်း ဒီလိုပုံစံတူ အလားသဏ္ဍာန်တူဖြစ်ရပ်မျိုး ရှိနေကြတဲ့အတွက် မိတ်ဆွေ၊ သူငယ်ချင်းတွေကြားမှာ နားလည်မှုလွဲ၊ အထင်လွဲ၊ အမြင်လွဲတွေအများကြီးဖြစ်လာ နိုင်ကြပါတယ်။
တကယ်လို့သာ သူငယ်ချင်း(C)က သူငယ်ချင်း(A)ရော(B)နှစ်ဦးစလုံး ပြောကြားလာတဲ့ စကားနှစ်ဖက်ကို ကြားသိခဲ့ရရင် ဒီကြိုးလေးပြတ်တောက်သွားမှာတဲ့လား?
သူငယ်ချင်း(B)ကရော ဘာကြောင့် အမှန်တရားကို မဖြေရှင်းဘဲ ခေါင်းငုံ့ငြိမ်ခံနေခဲ့တာလဲ?
သူငယ်ချင်း(A)ကရောဘာကြောင့်များ ငွေကျပ် (၂)သိန်းတည်းနဲ့ အဖြူရောင်သံယောဇဉ်ကြိုးကို ဖြတ် တောက်ပစ်ရက်တာလဲ?
ဒါတွေအားလုံးရဲ့ အဆုံးသတ်အဖြေကို နားလည်မှု၊ စေတနာမှုတွေနဲ့ပဲ စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ကြည့် စေချင်ပါတယ်။
ဒုတိယမြောက်ပုံပြင်လေးအတွက်အသိပေးချင်တာက လူတစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းစီမှာ ကိုယ်ပိုင် လျှို့ဝှက်ချက် ကိုယ်စီရှိတတ်ကြပါတယ်။
မိသားစုအတွင်းရေးကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ် ချစ်သူ သမီးရည်းစားကြားမှာပဲဖြစ်ဖြစ် မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်း ကြားမှာမဆို ဖွင့်ပြောသင့်တဲ့ အတွင်းရေးလျှို့ဝှက်ချက်ရှိသလို ဖွင့်မပြောသင့်တဲ့ အတွင်းရေး လျှို့ဝှက်ချက်မျိုးလည်း ရှိတတ်ကြပါတယ်။
ရံဖန်ရံခါ မိမိတို့သိပ်ယုံကြည်အားကိုးတတ်ကြတဲ့ တိုင်ပင်ဖော်တိုင်ပင်ဖက်တွေကိုလည်း ဖွင့်ဟ ရင်ဖွင့်မိတဲ့ အထိအတွင်းရေးကို ဖော်ထုတ်တတ်ကြသူတွေလည်းရှိကြပါတယ်။
အဲဒီအတွက် မိမိဟာသူတစ်ပါးရဲ့ တိုင်ပင်ဖော်တိုင်ပင်ဖက် ဖြစ်လာပြီဆိုကတည်းက သူ ကိုယ့်အပေါ်ထားတဲ့ ယုံကြည်မှုကရာခိုင်နှုန်းအပြည့်ဆိုတာကို အသေအချာသိရှိထားသင့်ပါတယ်။
ဒီတော့ကာ ယုံကြည်လို့ပုံအပ်သူရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ကိုရာသက်ပန် စောင့်ထိန်းရတော့မယ့်တာဝန်က
တိုင်ပင်ခံရသူရဲ့သစ္စာတရားတစ်ခုလို့ခံယူ မိပါတယ်။ ဖွင့်ဟပြောခဲ့သူအနေနဲ့ရော သူ့အတွက် ဘာအကျိုးအမြတ်မှ ပြန်ရမှာမဟုတ်တာသိသိကြီးနဲ့ ဘဲရင်ဖွင့်လိုက်လို့ ခံစားရသမျှ ပေါ့ပါးသွားစေ ဆိုတဲ့ စိတ်တစ်ခုတည်းနဲ့ သာဆိုရင် ပိုလို့တောင် စောင့်ထိန်းထားကြရမှာပေါ့။
“အန်တီရယ် ကျွန်မအဖေကလေ တကယ်တော့ ထောင်ကျနေတာပါ ၊ ဒါတွေကို သမီး ရှက်လွန်းလို့ ဘယ်သူ့ကိုမှလည်း မပြောရဲပါဘူး။ ဖေဖေက သူများချောက်တွန်းတာကိုခံလိုက် ရတာပါ။ မိသားစုတစ်ခုလုံး အရှက်တကွဲ အကျိုးနည်းဖြစ်မှာစိုးလို့ ဒီအကြောင်းကို အမှန်အတိုင်းမပြောဘဲ နီးစပ်ရာက မိတ်ဆွေတွေမေးလာတိုင်း နိုင်ငံခြားထွက်သွားတယ်လို့ သမီးပြောနေရတာပါ။
အမှန်အတိုင်း သူများတွေသိတော့လည်း သမီးတို့အတွက်ရော သူတို့အတွက် ပါအကျိုးမှမရှိတာ အရှက်ကွဲရုံပဲအဖတ်တင်မှာလေ”
လို့အစချီပြီး ဇာတ်ကောင်(F)က ဇာတ်ကောင်(G)ကို သောကတွေပြေလိုပြေငြား မဆီမဆိုင် ရင်ဖွင့်ခဲ့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။
ဇာတ်ကောင်(G)ရဲ့ စိတ်ထဲမှာလည်း “ သြော် (F)က ငါ့ကို တော်တော်ယုံကြည်တာပဲ။ သူ့ဘ၀က သနားစရာလေး” ဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ ပိုနေမြဲ ကျားနေမြဲဆက်ဆံပေါင်းသင်းလာခဲ့ပါတယ်။ သိပ်မကြာခင် မှာပဲ ဇာတ်ကောင်(F)နဲ့ (G)ကြားကို ဇာတ်ကောင်(E) ရောက်ရှိလာခဲ့ပါတော့တယ်။
“အန်တီရေ---- (F)တို့မိသားစု သတင်းကြားပြီးပြီလား? သူ့အဖေက အလွဲသုံးစားမှုနဲ့ ထောင်ကျ နေတာနော်။ အဲဒါကြောင့် သူတို့မိသားစုက ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ငြိမ်ကုတ်နေကြတာလေ။ အပြင်ပန်း ကြည့်တော့သာ ရိုးသားသလိုလိုဘာလိုလိုနဲ့ အလကား လူလိမ်မိသားစုတွေ” ဇာတ်ကောင်(E)ရဲ့စကားသံအဆုံးမှာ မခံချိမခံသာဖြစ်သွားသူက ဇာတ်ကောင်(G)ပါ။
ဒါကလည်း ကျွန်မတို့ လူသားတွေရဲ့ မခံချင်စိတ်ပြင်းပြတတ်တဲ့ စိတ်ဓာတ်လေးတစ်ခုပါပဲ။
“အို မဟုတ်တာကွယ်။ သူ့အန်တီကို အကုန်ပြောပြပါတယ်။ သူ့အဖေက အထင်လွဲခံရတာ တဲ့လေ။ ပစ္စည်းတွေကလည်း သူ့အဖေယူတာမဟုတ်ဘူး။ သူ့အဖေရဲ့သူဌေးက လုပ်တာကို ကျေးဇူးရှင်ဖြစ်နေလို့ ဓားစာခံလက်မှတ်ထိုးလိုက်ရတာပါ။ အဲဒါကြောင့် တရားခံစာရင်းဝင်သွားတာပါ။
သူများ အကြောင်းတွေကို အဲဒီလို သေချာမသိဘဲ မပြောပါနဲ့။ ငရဲကြီးလိမ့်မယ်”
“ဟာ အန်တီကလည်း ဘာမှလည်းမသိဘဲ သူပြောသမျှ လှိမ့်ယုံနေတော့တာပဲ။ ကျွန်မက မသေချာဘဲပြောပါ့မလား။ကျွန်မအဒေါ်နဲ့ သူ့အဖေနဲ့က တစ်ရုံးတည်း လုပ်လာကြတာ။ အခု ဆိုကြည့်ပါလား။ အဖေသာ တောင်ထဲမှာ သူတို့မိသားစု မွဲတေသွားလို့လား။ ဖုန်းနဲ့ ကားနဲ့ ရွှေ ငွေတွေ အပြည့်ပဲလေ။ သူတို့မခိုးထားဘဲ ဒါတွေ ဘယ်ကရမလဲ ကဲ ပြော”
ဇာတ်ကောင်(E)ရဲ့ တိတိပပပြောကြားချက်တွေကြောင့် ဇာတ်ကောင်(G)တစ်ယောက် မခံချင် စိတ်ကို နှိုးဆွလိုက်သလိုခံစားလိုက်ရပါတယ်။ အဲဒါကြောင့်လည်း ခပ်သွက်သွက်လေး ပြန်ပြောလိုက်တာက
“အို အဲဒါကလည်း သူ့အဖေရဲ့ သူဌေးဆိုတဲ့သူက နစ်နာကြေးအဖြစ် ထောက်ပံ့ထားတာတွေ လေ။ သူကိုယ်တိုင် ငါ့ကို သေချာပြောခဲ့တာပါဟဲ့”
“ဟာ တော်တော်အယုံလွယ်တဲ့အန်တီပါလား။ သူခိုးကတော့ ခိုးပါတယ်လို့ ဘယ်ဝန်ခံပါ့မလဲအန်တီရဲ့ 
သေချာ စဉ်းစားကြည့်ပါဦး။ အန်တီတော့ ကောင်းကောင်းကြီး အလိမ်ခံလိုက်ရပြီ။ ဒီလိုလူမျိုးကို သွားပေါင်း မနေပါနဲ့။ ကိုယ်ပါရောပြီး သိက္ခာချတယ်။”
ရှုပ်ထွေးစရာ အာရုံတွေကြားမှာ ဒွိဟဖြစ်သွားခဲ့ရတဲ့ ဇာတ်ကောင်(G)တစ်ယောက် ဇာတ်ကောင်(F)ကို အလိုလိုစွန့်ခွာသွားပါတော့တယ်။
တကယ်ဆိုရင် G နဲ့ လည်း F မိသားစု ပြသာနာဟာဘယ်လိုနည်းနဲ့မှ မပတ်သက်သလို အကျိုးနစ်နာမှု တစ်စုံတစ်ရာလည်းမရှိခဲ့ပါဘဲ Eရဲ့ စကားတစ်ခွန်းကြောင့် ကြိုးလေးပြတ်သွားရပြန်တာ ဘာကြောင့် ပါလဲ?
ဇာတ်ကောင်(E)ကရော ဘာကြောင့်များ ကိုယ်တိုင်မသိတဲ့ F ရဲ့ အတွင်းရေးမှာ ၀င်ပြီး စွက်ဖက် ဟန့်တားရတာလဲ?
ဇာတ်ကောင်(F)ကရော ဇာတ်ကောင်(G)ကို ဘာကြောင့်များမိသားစု အတွင်းရေးလျှို့ဝှက်ချက်ကို ဖွင့်ဟပြောဆိုရတာလဲ?
ဒီအခြေအနေမှာသူ မပြောပြရင်လည်း ရနေတဲ့အနေအထားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဇာတ်ကောင်(G) အနေနဲ့ကရော ဘာကြောင့်များ ကိုယ့်ကို ယုံကြည်လို့ ပုံအပ်ဖွင့်ဟလာသူရဲ့ နှုတ်ထွက်စကားကို တန်ဖိုးမထားဘဲ ချိုးဖျက်ခဲ့ရတာလဲ?
ဒီပုံပြင်လေးမှာ အတွေးပွားစရာအဖြာဖြာကို ရရှိနိုင်ကြမှာသေချာပါတယ်။ ကျွန်မတို့အားလုံးဟာ လူသားထဲကလူသားတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက် လူ့လောကကြီးနဲ့ဘယ်လိုမှ ကင်းဝေးလို့မရကြပါဘူး။
မကင်းနိုင်လို့ပေါင်းသင်းကြပြီဟေ့ဆိုရင်လည်း နားလည်မှုနဲ့စာနာခြင်းလေးတွေကို ခိုင်ခိုင်စွဲကိုင်ပြီး
ရှေ့ဆက်လျှောက်လှမ်းဖို့ ပိုပြီး မသင့်တော်ပေဘူးလားရှင် ?
ကျွန်မတို့ဘ၀တွေမှာ မသေခင်စပ်ကြား လိုအပ်နေတဲ့ ကွက်လပ်လေးတွေ ဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ လစ်ဟ နေတဲ့ အပေါက်တွေကို ပြန်လည်ဖာတေးနိုင်ဖို့ လိုအပ်ချက်လေးတွေကို သိရှိနိုင်ဖို့ ဖယောင်းတိုင် (၅)တိုင်ဥပမာနဲ့ပြောပြပါရစေရှင်။
ဒီဥပမာလေးကိုသိရှိပြီးသူတွေလည်းရှိကြမှာပါ။ မသိသေးသူတွေအတွက်ဆိုရင်တော့ အသစ်ပေါ့ရှင်။ ဗဟုသုတဆိုတာ အင်္ကျီတစ်ထည်လိုပါပဲ။ တစ်ကြိမ်တစ်ခါမှ မ၀တ်ဖူးခင်မှာတော့ သစ်လွင် တောက်ပမှုကို သာယာပြီး ခဏခဏ ၀တ်ကြည့်ချင်ကြပေမယ့် ၀တ်ဖူးပြီးသွားလို့ ဟောင်းသွားရင် လည်း သူ့နေရာဒေသအလိုက်တော့ ပြန်လည်လျှော်ဖွတ်ပြီး ၀တ်နေကြမြဲ သဘောတရားအတိုင်းပါပဲ။
တစ်ခါတုန်းက အလင်းမရှိဘဲ မှောင်နေတဲ့ အခန်းကျဉ်းလေးတစ်ခန်းထဲမှာ ဖယောင်းတိုင်ကလေး (၅)တိုင်ဟာ အလင်း ကိုယ်စီနဲ့ တောက်ပနေကြပါတယ်။ ဖယောင်းတိုင်(၅)တိုင်ရဲ့အလင်းအားကြောင့် မှောင်မည်း နေတဲ့အခန်းဟာ လင်းထိန်နေတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာအခန်းထဲကိုလေပြေပျော့လေး တိုက်ခတ်နေသတဲ့။
တစ်ခါတစ်ခါမှာ လေတိုက်နှုန်းက ပြင်းသွားလိုက်၊ တစ်ခါတစ်ခါမှာ လေဟာ ငြိမ် သွားလိုက်နဲ့ပေါ့။ လေတစ်ချက်အဝေ့မှာ ဖယောင်းတိုင်လေးတစ်တိုင် မီးငြိမ်းသွားတယ်။ အခန်းဟာ အလင်းအား နည်းနည်းလျော့သွားတယ်။
အဲဒီဖယောင်းတိုင်လေးကို အချစ်လို့ နာမည်ပေးထားပါတယ်။ အချစ်ဆိုတဲ့ အလင်းအားလေး လျော့သွားတော့ အခန်းဟာ နည်းနည်းလေးမှောင်သွားတယ်။ နောက်ထပ် လေတစ်ချက်အဝှေ့မှာ ဒုတိယ ဖယောင်းတိုင်လေး မီးငြိမ်းသွားပြန်တယ်။ အဲဒီဖယောင်းတိုင်လေးကို သံယောဇဉ်လို့ နာမည်ပေးထားပါတယ်။
ဒီအခန်းထဲမှာ အချစ်ဆိုတဲ့အလင်းရောင်ရယ်၊ သံယောဇဉ်ဆိုတဲ့အလင်းရောင်ရယ်မရှိတော့ပါဘူး။ အခန်းဟာအမှောင်ထုကြီးစိုးလာပါတော့တယ်။
ဒီလိုနဲ့နောက်ထပ်လေတစ်ချက်အဝေ့မှာ တတိယဖယောင်းတိုင်လေးမီးငြိမ်းသွားပြန်တယ်။ အဲဒီ ဖယောင်းတိုင်လေးကို မေတ္တာတရားလို့ နာမည်ပေးထာပါတယ်။ ဒီလိုပဲ နောက်ထပ်လေတစ်ချက် အဝေ့မှာ စတုတ္ထဖယောင်းတိုင်လေး မီးငြိမ်းသွားပြန်ပါတော့တယ်။ ဖယောင်းတိုင်(၅)တိုင် အလင်းအားရှိတဲ့ ဒီအခန်းဟာ ဖယောင်းတိုင်(၁)တိုင်မျှသာ အလင်းအားရပါတော့တယ်။
ဒီနောက်ဆုံး ဖယောင်းတိုင်လေးသာ လေအဝေ့မှာ မီးညွန့်ကလေးငြိမ်းသွားခဲ့ရင် ဒီတစ်ခန်းလုံး မှောင်မည်းသွားတော့မှာ အမှန်ပါ။ ကံကောင်းချင်တော့ အဲဒီအခန်းထဲကို အခန်းပိုင်ရှင်ပြန်လည် ရောက်ရှိလာပါတယ်။
“ဟာ-----အခန်းကြီးက မှောင်မည်းနေတာပဲ အို--တော်သေးတာပေါ့။ ဖယောင်းတိုင်လေး တစ်တိုင် လင်းနေသေးလို့” ပြောပြောဆိုဆိုနဲ့ကျန်နေတဲ့ဖယောင်းတိုင်ရဲ့မီးညွန့်ကို လက်ဝါးလေးနဲ့ အသာကာလိုက်တယ်။
အဲဒီအခါမှာ အလင်းရောင်မှိန်ပျပျအောက်မှာ မီးငြိမ်းနေတဲ့ ဖယောင်းတိုင်(၄)တိုင်ကိုလည်း သူကတွေ့သွားပါတော့တယ်။ ချက်ချင်းဆိုသလိုပဲ နောက်ဆုံးကျန်နေတဲ့ ဖယောင်းတိုင်ရဲ့ မီးညွန့်ကိုကူးပြီး မီးငြိမ်းသွားခဲ့တဲ့ ဖယောင်းတိုင်လေးတွေကို စိတ်ရှည်လက်ရှည်နဲ့ မီးကူးပေး လိုက်ပါတော့တယ်။
အဲဒီအခါမှာ အခန်းလေးက အရင်အတိုင်းပဲ ပြန်ပြီး လင်းထိန်သွားပါတော့တယ်။ နောက်ဆုံး ကျန်နေတဲ့ ဖယောင်းတိုင်လေးကို နားလည်စာနာ ပေးမှုဖယောင်းတိုင်လို့ နာမည်ပေး ထားလိုက်ပါတယ်။
(စာဖတ်သူများလည်း နှစ်သက်သလို ခံစားမိသလိုနာမည်ပေးကြည့်စေချင်ပါတယ်)
လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ကြားမှာ “နားလည် ပေးမှု၊ စာနာပေးမှု”ဆိုတဲ့အလင်းအားရှိတဲ့ ဖယောင်းတိုင်လေးသာ ရှိနေသေးရင် အချစ်ဆိုတာပြန်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သံယောဇဉ်ဆိုတာ ပြန်ဖြစ်နိုင်တယ်။
မေတ္တာတရား၊ ကရုဏာတရားတွေ ပြန်လည်ရှင်သန်နိုင်ပါတယ်။
နားလည်ပေးမှု၊စာနာပေးမှုဆိုတဲ့ ဖယောင်းတိုင်လေးသာ မီးငြိမ်းသွားခဲ့ရင် အခန်းကြီး မှောင်မည်း သွားနိုင်သလို အချစ်တွေ၊ မေတ္တာတရားတွေ၊သံယောဇဉ်တွေ ကရုဏာတရားတွေ ပြန်ဖြစ်ဖို့ မလွယ်တော့ပါဘူး။
ဒီလိုပါပဲ လောကကြီးမှာလည်းတစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦးနားလည်စာနာမှုမရှိရင် လူ့ဘ၀ရဲ့ အနှစ်သာ ရလည်း ပျက်စီးသွားတော့မှာပါပဲ။
ကျွန်မ အထက်မှာပြောပြခဲ့တဲ့ ပုံပြင်ဥပမာလေးတွေရဲ့ အဓိကပြသာနာက “နားလည်မှု၊ စာနာပေးမှု” မရှိခဲ့တာကြောင့်ပါပဲ။
ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ အကြောင်းအရာတိုင်းမှာ နားလည်၊စာနာပေးမှု ဖယောင်းတိုင်လေးသာ လင်းလက် နေခဲ့မယ်ဆိုရင် လူမှုဆက်ဆံရေးရဲ့ ပျော်စရာကောင်းတဲ့ အနှစ်သာရကိုလူ့ဘ၀ မကုန်ဆုံးခင် စပ်ကြား ကျွန်မတို့ခံစားရရှိနိုင်ကြမှာပါ။
မိသားစုတစ်စုမှာလည်းဇရာနဲ့ အသက်အရွယ်ကြောင့် အိုမင်းမစွမ်းဖြစ်လာတဲ့ မိဘနှစ်ပါးအပေါ် “နားလည်၊စာနာမှု” ဖယောင်းတိုင်လေး ထွန်းညှိပေးထားတတ်တဲ့ သားသမီးတွေကို ရရှိထားတဲ့ မိဘတွေအတွက် ဘယ်လောက်တောင် စိတ်ချမ်းသာကြမလဲ။
သြော်--ငါတို့ မိဘတွေက အခုအသက်ကြီးလာလို့ ငါတို့ ကိုရှာဖွေ ကျွေးမွေးနိုင်စွမ်းတွေ ထောက်ပံ့ နိုင်စွမ်းတွေ လျော့နည်းသွားကြပေမယ့် ငါတို့ မွေးစကနေ လူလားမြောက်သည်အထိ သူတို့ ပင်ပင်ပန်းပန်းရှာဖွေ ကျွေးမွေးစောင့်ရှောက်ပေးခဲ့ကြတာပဲလေ.။ အခု ငါတို့ တစ်လှည့်ပြန်ပြီး ပြုစုရမယ့် အချိန်ရောက်လာပြီ။ မိဘတွေမသေခင် ပြုစုသွားမှ သူတို့စိတ်ချမ်းသာစွာ နဲ့ နောက်ဆုံးအချိန်တွေကို ကျော်ဖြတ်နိုင်မှာသေချာပါတယ် ဆိုတဲ့ နားလည် စာနာမှုအတွေးတွေကို
တွေးကြည့်လိုက်တာနဲ့ သားသမီးတွေအတွက် ပျော်စရာကောင်းပါတယ်နော်။
တစ်ချိန်မှာ ကျွန်မတို့လူသားတွေအားလုံးမှာ ဘ၀လက်တွဲဖော်ဆိုတာ ကိုယ်စီရှိလာကြမှာပါ။ လက်တွဲဖော်ရှိနေပြီးသား လူတွေလည်းရှိနေသလို၊ မရှိသေးတဲ့သူတွေ၊ လက်တွဲဖော်နဲ့ နီးစပ်ဖို့ကြိုးစားနေသူတွေအတွက် ကိုယ့်ကိုနားလည်စာနာမှု များစွာနဲ့ ပေးစွမ်းနိုင်တဲ့ ချစ်သူကိုသာ ရရှိပိုင်ဆိုင်ခွင့် ရမယ်ဆိုရင်တော့ အချစ်ဆိုတာ ချိုမြိန်မှုတွေနဲ့အတူ ပျော်ရွှင်စရာ အတိနဲ့ လင်းလက် ရှင်သန်နေမှာပါပဲ။
အပြန်အလှန်နားလည်ပေးတဲ့ စာနာပေးတဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းတွေသာ ကျွန်မတို့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ရှိခဲ့ရင် ကျွန်မတို့ လူ့ဘောင်လောကကြီးဟာ ဒီထက်ပိုပြီး သာယာလာပါလိမ့်မယ်။ ငြိမ်းချမ်းလာပါ လိမ့်မယ်။ တိုးတက်လာပါလိမ့်မယ်။ ပျော်စရာလည်းကောင်းလာပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် ဘယ်နေရာမှာမဆို “နားလည်ပေးမှုနဲ့ စာနာပေးမှု” အပြန်အလှန် ရှိကြမယ်ဆိုရင် လောကကြီးဟာ ငြိမ်းချမ်းနေမှာပါ။
“နားလည်ပေးမှုနဲ့ စာနာပေးမှု”ကိုတော့ အလွဲသုံးစား မလုပ်သင့်ပါဘူး။
“နားလည်ပေးမှုနဲ့ စာနာပေးမှု”ကိုတော့ အခွင့်ကောင်းမယူသင့်ဘူး။
“နာလည်ပေးမှုနဲ့ စာနာပေးမှု”ကို တန်ဖိုးမဲ့အောင် မလုပ်သင့်ပါဘူး။
“ချစ်သူတွေ၊ သူငယ်ချင်းတွေ၊မိသားစုတွေ၊ လူသားတွေ၊ အဖွဲ့အစည်းတွေ”ရဲ့ ကြားမှာ နားလည် ပေးမှုနဲ့ စာနာပေးမှု”ဆိုတဲ့ အလင်းရောင်ကလေးနဲ့ “အချစ်တွေ၊ သံယောဇဉ်တွေ၊ မေတ္တာတရားတွေ၊ ကရုဏာတရားတွေ” ပြန်လည် ရှင်သန်ထွန်းလင်းကြပါစေလို့ အရိုးသားဆုံးဆန္ဒ´ပြုလိုက် ပါတယ်။
၂၀၁၁၊ ဇွန်လ ၈ ရက် ၊ မနက် ၃:၃၀နာရီ
(P.S------- ဒီဆောင်းပါးလေးနဲ့ ကျွန်မရဲ့ဒွိဟဖြစ်နေတဲ့စိတ်တွေကို နည်းလမ်းမှန်မှန်ဆုံးဖြတ်နိုင်အောင် လမ်းမှန်ပေါ်ရောက်အောင် စာတွေ့ အသိတွေ ပွားစေခဲ့တဲ့ ဆရာဦးဘုန်း ကိုဂါဝရပြုလိုက်ပါတယ်ရှင်)
Sis, this isareally nice post and I would like to share about this article for others on facebook!